Wedding Album: Olee ka Custom Digital Wedding Album b
> Resource> Atụmatụ> Wedding Album: Olee ka Custom Digital Wedding Album
Mgbe ihe a afọ nke agbamakwụkwọ atụmatụ, si njikọ aka mara ọkwa na-eziga agbamakwụkwọ akwụkwọ ịkpọ òkù, si ị na-ahọrọ uwe agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ mmeghari, agbamakwụkwọ gị abịa na obi ụtọ na obi ụtọ ọgwụgwụ maka naanị awa ole na ole. Ọ bụla oge na-eme ka gị Edebewo-echeta, na a pụtara agbamakwụkwọ album pụrụ inyere gị aka iji chebe ndị a. Na ebe a na ị ga-amụta otú mfe ma creatively-eme ka a agbamakwụkwọ album na zuru ezu. Isi ihe a na-arụ ọrụ bụ gị pụrụ ichetụ n'echiche.
E nwere ụfọdụ iche-iche nke agbamakwụkwọ albums: Online Wedding Album, Wedding DVD Album, na Wedding video album. Soro ndu n'okpuru ịhụ otú ike a di iche iche nke agbamakwụkwọ album:
Part 1: Olee ka a Wedding online Album
Part 2: Olee ka a Wedding video, DVD Album
Ọ bụrụ na ị chọrọ ikere òkè gị foto agbamakwụkwọ online, nhọrọ kasị mma bụ ime ka a Foto agbamakwụkwọ album na Flash format, nke nwere ike na-egwuri on fọrọ nke nta niile weebụsaịtị na-enweghị wụnye software ọ bụla, na oji a ọma itule n'etiti àgwà na faịlụ size. Flash Gallery Factory Deluxe Na- ihe dị mfe na-eji online foto album onye na-enye ụdị breathtaking 2D ma ọ bụ 3D ndebiri.
Họrọ a Foto agbamakwụkwọ album template
Mbubata gị foto agbamakwụkwọ na album onye
Chekwaa ma ọ bụ na-ebipụta ya na YouTube, gị website na ndị ọzọ
Kere na Flash Gallery Factory Deluxe
Ime a nkiri na agbamakwụkwọ gị photos bụ ezi echiche na-egosi gị obi ụtọ mgbe agbamakwụkwọ ememe. DVD Slideshow Builder Deluxe Ebe a na-eji na-eme ka a agbamakwụkwọ video album ma ọ bụ agbamakwụkwọ DVD album na photos, videos na songs, na a okike ụzọ.
The Wedding album onye nwere ike ịhazi foto gị dị iche iche dị isi, dị ka agbamakwụkwọ nkwadebe, ụbọchị agbamakwụkwọ, agbamakwụkwọ na oriri, n'ikuku, honiimuunu, wdg Na a ime akara, ị nwere ike chigharịkwuru ọ bụla oge nke gị ụbọchị pụrụ iche na nnukwu ihuenyo, -amasị-eme ụnyaahụ. Agbamakwụkwọ DVD album, ị na-atụ aro ka ịgbakwunye akọwa utu aha na-agwa a na-akpa ọchị ma ọ bụ na-emetụ n'ahụ agbamakwụkwọ akụkọ. Ebe a bụ otú:
Tinye agbamakwụkwọ gị foto na vidiyo.
Hazie agbamakwụkwọ gị foto album, n'ihi na ihe atụ, tinye ọkacha mmasị gị song dị ka ndabere music, itinye ndụmọdụ ụfọdụ mmetụta gị photos, dee a ozi foto ọ bụla, ma ọ bụ na-agwa agbamakwụkwọ akụkọ na gị onwe gị olu na na.
Zọpụta agbamakwụkwọ video album ma ọ bụ ọkụ na-agbamakwụkwọ DVD album, elu mma.
Kere site Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe
Wedding Daalụ kaadị Atụmatụ - Olee otú dee a Wedding Daalụ Kaadị
Facebook ozi Nchọpụta nsogbu
Olee otú Mee a ahaziri Business Òkù Kaadị
Otú na Quiz Onye kere Software Mee Online Quiz
Olee otú bulite foto iPhoto ka Facebook
Mee ka a Flash Pụrụ Iche na Flash Pụrụ Iche Templates